Xildhibaanno Federaal ah oo eedeeyay wasiiradda dowladda Federaalka – Kalfadhi
Xildhibaanno Federaal ah oo eedeeyay wasiiradda dowladda Federaalka
March 22, 2020 Hassan Istiila
Shirkii wada-tashiga Puntland, ee dhawaan lagu soo-gaba-gabeeyay magaalada Garowe, ayaa dhaliyay khilaafyo ka dhex dhashay xubnihii ka qeyb-gallay shirka.
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ka qeyb galay shirka ayaa ka hor-yimid war saxaafadeedkii dhowaan ka soo baxay wasiiro ka tirsan Xukuumadda ee ay uga soo horjeesteen qodobadii laga soo saaray shirkii Wadatashiga Puntland.
Xildhibaannadan ayaa sheegay in wasiirada aysan ku matalin war saxaafadeedka ka soo baxay, iyagoo xusay inuu ahaa qoraal looga soo yeeriyay Villa Somalia, iyagoo nasiiib darro ku tilmaamay in saddex maalin kaddib shirka ay soo saareen war saxaafadeed
Sidoo kale Xildhibaannada ayaa sheegay in Wasiirada ay ka abaal dhaceen casuumaadii iyo maamuuskii loo sameeyay, war saxaafadeedkooda uu deel qaaf ku yahay ergooyinkii iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Wasiiradda, ayaa horay u sheegay in ay ka soo horjeedaan qodobo kamid ahaa war-murtiyeedkii kasoo baxay shirka oo ay shegeen in aanu qeyb ka aheyn qodobadii lagu wada hadlay.
Guddi 13 xubnood oo ah wasiiro iyo xildhibaanno kasoo jeeda Beelaha Hawiye oo u safray Baydhabo